Zava-misy na angano: Tetika sivy izay heverina fa hitsimbinana bateria Vaovao IPhone
Ny fomba fanitarana ny baterin'ny fitaovantsika dia ady isan'andro. Ny iPad anay ary, ambonin'izany rehetra izany, ny iPhone, dia manana fizakantena voafetra, kely noho izay ilainay, ary azo antoka fa efa namaky tranokala tsy tambo isaina ianao izay mampanantena fahaleovan-tena mandritra ny ora maro manaraka ny toro-hevitra amin'ny karazany rehetra. Tao amin'ny MacWorld dia nanandrana izy ireo sivy amin'ireo torohevitra malaza indrindra hijerena izay zava-misy sy izay foronina. Lazainay aminao.
1 Alaharo ny batterie: somary marina
2 Ny famirapiratana avo dia midika fandaniam-bola avo kokoa - tena marina
3 Ny fizarana Library amin'ny iTunes dia mandany ny bateria: tena marina
4 Ny fanaovana AirPlay dia mandany ny baterinao haingana: diso
5 Ny famonoana ny ekipana mandritra ny filalaovana dia mampitombo ny faharetana: diso
6 Ny fampiharana manokana dia manatsara ny batterin'ny fitaovanao - sandoka
7 Ny bateria ivelany dia mampitombo ny fiainana bateria - tena marina
8 Ny toerana sy ny Sarintany dia misy fanjifana bateria avo lenta: tena marina
9 Ny fomba fiaramanidina dia mampitombo ny androm-piainany - tena marina
Alaharo ny batterie: zavatra cierto
Apple dia mamporisika antsika hanitsy ny batterin'ny fitaovantsika indraindray. Ity fizotrany ity dia misy ny famelana ny bateria hilentika tanteraka ary avy eo mameno azy tanteraka. Na dia dingana fanolorana azy aza izy io, dia mihoatra ny zava-drehetra ny fikarakarana ny baterinao mandritra ny fotoana maharitra ary mba azo itokisana ny vinavinan'ny bateria sisa tavela fa ny tena marina, tsy mampiakatra ny fizakantenan'ny fitaovanao mivantana.
Ny famirapiratana avo dia midika fandaniam-bola avo kokoa: tena marina
Ny famirapiratry ny efijery dia iray amin'ireo lafin-javatra izay misy akony amin'ny androm-piainany, ary tsy ao anatin'ny minitra vitsy fotsiny, fa amin'ny ora faharetana. Ny fametrahana ny hazavan'ny efijery amin'ny antsasaky dia mety hitarika amin'ny fiainana bateria an'ny iPad indroa raha toa ka manana ny famirapiratany hatramin'ny farany ambony indrindra izy. Ny antsipiriany tsotra toy izany dia afaka manakana ny iPhone tsy hamela anao handry eo afovoan'ny tolakandro nefa tsy ho afaka hampiasa azy, ka tadidio izany.
Ny fizarana Library avy amin'ny iTunes dia mandany ny baterinao: tena marina
Ny fijerena horonantsary voatahiry ao amin'ny fitaovanao dia misy fampiasa bateria ambany kokoa noho ianao raha toa ka voatahiry ao anaty iTunes ilay sarimihetsika ary jerenao amin'ny alàlan'ny streaming, mampiasa ny safidy «Mizara ao an-tranoko». Tamin'ny andrana dia naharitra 5 ora 34 minitra ny iPad nilalao horonantsary voatahiry ao amin'ny iPad, adiny iray lavalava kokoa noho ny tamin'ny nilalaovany via mivantana.
Ny fanaovana AirPlay dia manaparitaka haingana ny baterinao: falso
Mifanohitra amin'izay mitranga rehefa mivezivezy amin'ny solosaina mankany amin'ny fitaovantsika isika, ataovy AirPlay avy amin'ny fitaovantsika mankany amin'ny Apple TV tsy mandany fanjifana bateria be loatra. Tao anatin'ilay fitsapana dia nandefa horonantsary HD ny Apple iPad nandritra ny 13 ora 45 minitra ary mbola manana 82% ny faharetany sisa.
Ny famonoana ny ekipana mandritra ny filalaovana dia mampitombo ny faharetany: falso
Mifanohitra amin'izay ambaran'i Apple tenany sy ny rindranasa hafa, vonoy ny ekarista mandritra ny mozika milalao tsy manatsara ny fiainam-batterin'ny fitaovanao mihitsy. Ao amin'ny fitsapana natao, ny fantson'ny bateria rehefa afaka ora maromaro miaraka amin'ny playback izay navadika miaraka ary tsy misy ny ekarista dia nitovy.
Ny fampiharana manokana dia manatsara ny batterin'ny fitaovanao: falso
Misy fampiharana am-polony ao amin'ny App Store izay mampanantena fa hampitombo ny androm-piainan'ny fitaovanao. Nandritra ny fitsapana, ny telo amin'ireo malaza indrindra dia nodinihina: Doctor Doctor, BatterySense ary Sys Activity Manager Lite, ary ny tena izy dia izy ireo irery no tsy manao na inona na inona hampitomboana ny androm-piainanao. Afaka manome anao fampahalalana mahasoa momba ny fiainana bateria izy ireo, na torohevitra hikarakarana azy io, fa tsy misy ankoatr'izay.
Ny bateria ivelany dia mampitombo ny fiainana bateria: tena marina
Eny ... kely ny azo lazaina momba an'io, sa tsy izany? Mazava ho azy, ny fahazoana bateria ivelany, na amin'ny endrika tranga ho an'ny iPhone, na amin'ny endrika "labozia" ho an'ny iPad, dia hanampy anao hanana fahaleovan-tena bebe kokoa. Ary mazava ho azy, arakaraka ny maha avo ny fahaizan'ny batterie ivelany no manome anao ny fahaleovan-tena.
Ny toerana sy ny Maps dia mihevitra fa lafo ny vidin'ny bateria: tena marina
Manaraka ny famirapiratana, iray amin'ireo fiasa manala ny baterin'ny fitaovanao. Izay rindranasa izay mampiasa fampiasa amin'ny fomba mahery vaika ny GPS (TomTom, Maps, Google Maps ...) dia handao ny batterin'ny iPhone ao anatin'ny 4 ora, kely kokoa amin'ny iPad. Aza adino ny manidy ny rindranasa tanteraka rehefa vita ny tohiny mba hialana amin'ny tsy ampoizina tsy mahafinaritra.
Mampitombo ny fiainana bateria ny maody fiaramanidina: tena marina
Mazava ho azy koa fa raha vonoinay ny radio rehetra an'ny fitaovantsika (WiFi, Bluetooth, GPS, data, 3G) haharitra kokoa ny bateria. Mety mahasoa ny fampiasana an'io maody io rehefa mila mijery sarimihetsika isika ary tsy te-ho voakorontana mandritra io fotoana io, tamin'ny andrana dia nahazo filalaovana 30 minitra fanampiny izy ireo tamin'ny maody fiaramanidina tamin'ny iPhone 5.
Fanazavana fanampiny - Fizarana ao an-trano: ny tranombokinao iTunes amin'ny iPad anao
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Zava-misy na tantara foronina: fika sivy izay heverina fa hamonjy ny ain'ny bateria